छोरीहरु सँग हिमानी नाचेको भिडियो सामा जिक सञ्जा`लमा भाइरल !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/छोरीहरु सँग हिमानी नाचेको भिडियो सामा जिक सञ्जा`लमा भाइरल !!
काठमाडौं- पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह छोरी पू`र्णिका र कृतिका शाहसँग नाचेको टिकटक भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् ।दुई वटा भिडियो भाइरल बनिरहेका बेला छोरीह`रुसँगै हिमानी नाचेको अर्को भिडियो समेत सार्व`जनिक भएको छ ।
पछिल्लो पटक ‘यो मन त मेरो नेपाली हो’ बो`लको गीतमा उनी आफ्नी छोरीसँगै नाचेकी छिन् ।लकडाउनको फुर्सदिलो समयमा उनीहरु टिकटकमा रमाएका छन् । यतिबेला हिमानी छोरीहरुसँगै थाइ`ल्याण्डमा छिन् ।
यसअघि गायक सबिन राईको गीत ‘गुरा`सको फेदमुनी’गीतमा छोरीहरुसँग नाचेकी थिइन् । उक्त भिडियो छोरी पूर्णिका शाहले आफ्नो टिकटक आईडीमा सो भिडियो सार्वजनिक गरेकी हुन् ।यस्तै अर्को एक भिडि`योमा हिमानी टिक`टकमा पछिल्लो समय भाइरल डिस्को म्युजिकमा छोरिहरुसँग नाचेकी छिन् ।
उक्त भिडियो हिमानीकी अर्की छोरी कृतिका शाहले आफ्नो टिकटक एका`उन्टमा अप`लोड गरेकी छन् ।शुभेच्छु`कहरुले `सामाजिक संजालमा हिमानीलाई छोरीहरुसँग दिदीबहिनी झैं देखिएको समेत बताएका छन्। धेरै शुभेच्छु`कहरुले उनीहरुलाई फलो गरिरहेका छन् । उनी`हरुको तारिफ समेत गरेका छन् ।